ठूल्ठूला खड्गो काट्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली SULSULE:A Truly Nepali News Portal
ठूल्ठूला खड्गो काट्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली
गएको साउनदेखि सुरु भएको हो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको स्वास्थ्य खतरा । एक महिनाभन्दा कम समयका बीच दुई पटक सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री दुवै पटक उनको स्वास्थ्यको बारे देशभित्र गम्भीर चिन्ता र चासो फैलियो । तर, दुवै पटक उनले त्यो खड्गो काटे । तर, उनको स्वास्थ्य भने ढुकक हुने अवस्थामा रहेन । नेपालकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि लामो समय अर्थात् अस्पताल भर्ना भैसक्दा पनि के–कस्तो भएको हो भन्ने नागरिकले भेउ पाउन सकेनन् । सूचना लुकाइको कारण यस्तो भएको भनियो । पछि उनी स्वस्थ भएर आएपछि त यस्तो कुनै शंका गर्नुपर्ने भएन तर, त्यो अवस्था पनि त्यति सामान्य थिएन । तर, यी सबै कठिन परिस्थतिलाई ओलीले काट्दै गए । पछिल्लो समय अर्को जटिलता थपियो तर यो जटिलताबाट पनि उनी खतारामुक्त घोषित भए ।
शुक्रबार उनलाई यस्तो खतरामुक्त रहेको जानकारी दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा एपेन्डिसाइटिसको अप्रेशन गरिएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले यो दिन पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन् ‘अहिलेको अवस्थामा खतरामुक्त हुनुहुन्छ । भोलि वा पर्सि वा भविष्यको कुरा समयले बताउँछ ।’ हो पनि चिकित्सकले तत्क्षणको अवस्था भन्ने हो । भोलि हुन्छ त्यसको ग्यारेण्टी कसैले गर्ने अवस्था हुँदैन । चिकित्सकहरूले पनि यस्तो दाबी गर्न नमिल्ला । मानिसको शरीरमा कुन बेला कुन रोग लाग्छ भन्न सकिन्न । त्यसमाथि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूलाई एपेन्डिसाइटिस हुँदा त्यसको उपचार निकै जटिल हुने मानिन्छ अर्थात् यो पनि एउटा खड्गो नै हो । एडेन्डिक्स फुट्दा पेटमा संक्रमण फैलने सम्भावना यस्ता बिरामीलाई अरुलाई भन्दा बढी हुने अवस्था पनि चिकित्सकले नै बताएका हुन् । त्यसैकारण होला प्रधानमन्त्रीको यो उपचार आम नागरिकले हतपत नपाउने प्रकृतिको थियो । उनका लागि छुट्टै आईसीयू खडा गरियो । पुरै टिम तयार भयो तर शल्यकृयामार्फत उपचार सुरु भयो । यो अवस्था निश्चय नै साधारण मान्छेका लागि थिएन । यत्ति हो, देशका प्रधानमन्त्रीले जस्तो उपचार पाउनुपर्ने थियो, पुरै क्षमताको प्रदर्शनी र तत्परता । योचाहिँ यो पटक प्रकट भएको मान्नुपर्छ । एकातिर शल्यकृया र अर्कातिर रगत शुद्धीकरण गर्ने काम सँगसँगै चलेको अवस्था देखियो । यति जटिल अवस्थाको उपचार पनि नोपालमा सम्भव छ भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब आम नागरिकका लागि पनि अस्पतालले यस्तो सहजता दिलाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने यो संयत्र विशेषका लागि मात्र हो भन्ने सन्देश जान्छ र मानिसमा निराशता आउन सक्तछ ।
त्यो पत्रकार सम्मेलनमा नै प्रधानमन्त्रको उपचारमा नेतृत्व गरेका डा. रमेशसिंह भण्डारीले भने, ‘संक्रमण पेटभरि फैलिएको थियो । लक्किली ठीक समयमा सबै हेरियो र चाँडै अप्रेशनको निर्णय लियौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सुधार भइरहेको अवस्था छ । योबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई प्लेटलेट्स दिइएको थियो । त्यसका बारे डा. शाहले भनिन –अप्रेशन गरेको बिरामीमा धेरै रक्तस्राव वा संक्रमण नहोस् भनेर प्लेटलेट्स चढाइएको हो । डा. सिंहले भनेअनुसार ‘एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसनका क्रममा पनि दुर्ई पटक डायलासिस गरिएको छ । उनको स्वास्थ्यलाई स्थिर अवस्थामा राख्न यसो गरिएको हो अब स्टेबल भइसकेको छ । चाहिएको बेला मात्र गर्छौँ ।’ उनले थप जानकारी दिइन –प्रधानमन्त्री ओलीको पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पनि तयारी भइरहेको छ । यसबारे अन्तिम निर्णय लिनुपूर्व छलफल भइरहेका बेला एपेन्डिसाइटिसको अपरेशन गर्नु प¥यो । नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने भयो भने तुरुन्तै गरौँला । नभए अलि समयपछाडि होला । एपेन्डिसाइटिसको उपचार अपेक्षाअनुसार सफल भयो र घाउहरू पुरियो भने छिट्टै पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जाने सम्भावना छ ।’
अस्पताल पुग्न र रोग के हो भन्ने खुटिन केही समय ढिलो भएको भए स्थिति जे पनि हुन् सक्ने थियो । यो मंगलबारको कुरा हो । यही दिन बिहान प्रधानमन्त्री असपताल पुगेका हुन् र पुग्नासाथ नयाँ–नयाँ कोठामा नयाँ आईसीयू खडा गरेर अप्रेशन थालिहालियो । यस दिन प्रधानमन्त्री ओली बिहान ९ बजे मनमोहन सेन्टरमा पुगेका वा लगिएका हुन् । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएअनुसार प्रधानमन्त्री पुग्दानपुग्दै मनमोहन सेन्टरका कार्याकारी निर्देशक प्राडा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइसकेका थिए । जाँदाजाँदै सर्जन डा. भण्डारी, डा. पलेश्वा जोशी लाखे, डा. सुनिता शल्यक्रियाका लागि तयारी थिए । एनेस्थेसिस्ट डा. विश्वास प्रधान डा. सुवास आचार्य, डा. प्रवेशसुन्दर श्रेष्ठ, डा. विभु श्रेष्ठ, डा. हेम पनेरू पनि त्यस्तै । बताइएअनुसार करिब आधा घण्टामा नै अपे्रशन सुरु भएको थियो । डा. शाहका अनुसार एनेस्थेसिस्टहरूबाट सामान्य बेहोस गराइयो, सर्जन डा. भण्डारी डा. लाखे पनि जुटनुभयो । तत्कालै शल्यक्रिया गरियो । पेटको संक्रमण हटाइयो । एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्दा सामान्य बिरामीलाई भन्दा जोखिम अलि बढी थियो । सर्जक डा. भण्डारीले भने –प्रधानमन्त्री ओलीलाई रातिदेखि नै समस्याले च्यापेका कारण पेटमा संक्रमण भएको रहेछ । पेटमा संक्रमण (पेरिटोनाइटिस) थियो । सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो । ठीक समयमा छिटो निर्णय भयो । शल्यक्रिया सफल भयो ।’
चिकित्सकले बताएअनुसर प्रधानमन्त्री ओली खतरामुक्त भए पनि अझै केही दिन सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मै राखिने भएको छ । सोको जानकारी क्रिटिकल केयरका डा. सुवास आचार्यले गराएका हुन् । उनले भने ‘पेटको आलो घाउ छ । आगन्तुक भेट्न चाहिरहेका छन् । बाहिर सार्दा वार्डका अन्य बिरामी र आगन्तुकबाट संक्रमण हुन् सक्ने भएकाले आईसीयूमा राखिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार टोलीका संयोजक प्राडा. अरुण सायमीले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताए । उनले भने ‘उहाँ फुल्ली कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ । उपचारका क्रममा निको हुनका लागि कन्फिडेन्टले शतप्रतिशत त होइन, ८०–९० प्रतिशत सहयोग गर्छ । कत्ति पनि आत्तिनुभएको छैन । यति आत्मविश्वास भएको व्यक्ति देखेको छैन ।’
निजी चिकित्सक डा. शाहले दिएको जानकारीअनुसार ‘प्रधानमन्त्री ओलीको शारीरिक र बायोकेमिकल मापदण्डमा सुधार भइरहेको छ । रक्तचाप, नाडीको धड्कन (पल्स), श्वासप्रश्वास राम्रो छ । रगत र पिसाबमा गरिने जाँच पनि अपेक्षाअनुरूप सुधार देखिएको छ । पाचनक्रिया बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कंदै छ । बिस्तारै हिँडाउन थालिएको छ । ठोस खाद्यपदार्थ मुखबाट दिन थालिएको छ । आहार पचाउन थाल्नुभएको छ ।’
कुनै पनि रोगको उपचार भैरहेको अवस्थामा त्यो बिरामीमा सुधारका यस्ता पक्षलाई चिकित्सकीय भाषामा पनि खड्गो काट्दै गएको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यतिबेलाको अवस्था यो पटकको खड्गो काटिएकै अवस्था हो । सिंगापुरमा दुई पटक उपचार भएको थियो । पुरानो मिर्गौलाले काम नगर्नु आफैँमा एउटा खड्गो नै हो । दोस्रो फेरिएकोले यति लामो समयसम्म काम गरेको अवस्था छ । त्यहीबीचमा पेट चिर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबाट मुक्त हुन् त्यो उपचार सफल हुनु अर्कौ खड्गो कट्नु नै हो । तर, यता मिर्गौलाले काम नगरेको अवस्था भने यथावत नै छ । फेर्ने कि के गर्नु भन्ने अर्को खड्गोचाहिँ बाँकी नै छ ।
‘घाउ बिस्तारै निको हुन् थालेको छ । सबै चिज नियन्त्रणमा रह्यो भने अर्को सातासम्म डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ ।’ चिकित्सकले अर्को साता भनेका छन्, उनलाई डिस्चाार्ज गर्ने समय । यसको अर्थ हो अवका ८–१० दिन उपचारमै बित्ने छ । ‘सबैकुरा सोचेजस्तो भयो र एपेन्डिक्सको घाउ पनि छिटो निको हुँदै गएको अवस्थामा शल्यक्रियाकै कारण प्रत्यारोपण पछाडि सर्दैन । तैपनि अलि पछाडि जान सक्छ ।’ यो अर्को मिर्गौला फेर्ने सन्दर्भको कुरा हो । यता मिर्गौला नफेरुन्जेल सातामा दुई/तीन पटक डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । शल्यक्रियाकै क्रममा पनि दुई पटक यो काम गरिएको थियो । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)